Inkinobho yokulanda ayisebenzi
Umbuzo Inkinobho yokulanda ayisebenzi
izinyanga 6 4 Sekwedlule amaviki #1396 by tnig
Izinkinobho zokulanda azisebenzi.
izinyanga 6 3 Sekwedlule amaviki #1398 by rikoooo
Iyiphi isiphequluli se-intanethi oyisebenzisayo? Uma ungasinikezi ulwazi esingeke sikusize.
izinyanga 6 3 Sekwedlule amaviki #1399 by tnig
izinyanga 6 3 Sekwedlule amaviki #1400 by rikoooo
Ngakho kwenzekani uma uchofoza ekulayisheni? Ingabe kukhona amafasitela amancane avula?
izinyanga 6 3 Sekwedlule amaviki #1401 by tnig
Akukho okwenzekayo. Ayikho enye iwindi, akukho lutho. Ulayishe ngaphambilini, kodwa maduzane ube nale probem. Awuqinisekile ukuthi ngabe kungenxa yokubuyekeza ku-Firefox, noma yini.
izinyanga 6 3 Sekwedlule amaviki #1403 by rikoooo
Ngisanda kuhlola ngenguqulo yakamuva ye-Firefox futhi kuhle, amawindi aphuma phezulu. Mhlawumbe kufanele uhlole ukuthi i-anti-spam noma i-ad-blocker ayivimbeli amawindi okulanda. Zama nge-Chrome, uma isebenza ne-Chrome bese kungenzeka kube nenkinga nge-Firefox.
Isikhathi ukudala page: 0.189 imizuzwana